दीपिकालाई लाइक हान्नै हतार – Mero Film
दीपिकालाई लाइक हान्नै हतार
फिल्ममा काम गर्ने भनेर कानुनी रुपमा कागजमै लेखेर संझौता गर्दा पनि कलाकार बाहिरिएका हुन्छन् । कलाकारलाई राख्ने वा नराख्ने पुरा निर्णय निर्मातामाथि पनि हुन्छ । कलाकारको बाहिरिने हक पनि हुन्छ । यही भएर मौखिक सहमतीमा त विश्वास नै नगरौ, कागजको संझौता पनि कहिलेकाही फेल खान्छ ।
अझै पनि निर्माण गरेकी पूनम गौतमले नयाँ फिल्म बनाउने तयारी गरिरहेकी छिन् । उनले बनाउन लागेको फिल्ममा पुष्पल खड्का र रेविका गुरुङ कागजी रुपमा नै पक्का छन् । तर, अभिनेत्री दीपिका प्रसाइसँग त कागजी संझौता भएको छैन । तर, दीपिका फाइनल भनेर मिडियामा खबर पनि आयो ।
दीपिकालाई यो खबरले यति खुशी बनाएछ कि, उनी हरेक समाचारको तल धन्यवाद भन्न व्यस्त देखिइन् । आफ्नो नयाँ फिल्मको प्रचारमा मतलब नगरेकी दीपिकालाई कागजी रुपमा हस्ताक्षर नै नगरेको फिल्मको समाचारमा धन्यवाद भन्न यति हतार किन ? कलाकारले कहिलेकाही केही कुराहरुमा गोप्यता राखे पनि हुने ।
कागजमै काम गर्ने फाइनल भएपछि धन्यवाद भन्दा पनि हुने । दीपिकालाई संझौता नै नगरेको फिल्मलाई लिएर यति उत्साह किन होला ? बरु, काम गरिसकेको फिल्मको प्रचारमा यति उत्साह जनाइदिए, कति जाती हुन्थ्यो होला ?
२०७५ असोज २३ गते १५:१५ मा प्रकाशित